प्रकाण्ड काण्डै–काण्डमा, विप्लव सुटुक्क भारततिर ! – जनदिशा
national samachar tippadi आलेख
जनदिशा September 2, 2018	2 Comments khadga bahadur biswakarmakrishna bahadur maharanepali politicsprakaandaनेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’
काठमाडौं/नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका खड्गबहादुर वि.क. (प्रकाण्ड) साउन २२ गते पक्राउ परे । भूमिगत सशस्त्र विद्रोहको तयारीमा रहेको पार्टीको प्रवक्ता पक्राउ पर्नु त्यो पनि राजधानी प्रवेश गर्दै गर्दा गाडी र सहयोगीसहित– यो अचम्मै लागे पनि उनको पक्राउको विषय अझै रहस्यमय नै छ ।
विप्लवले आफ्नो प्रवक्ता पक्राउ पर्दा एउटा औपचारिक वक्तव्य सार्वजनिक गरे र त्यही वक्तव्यमार्फत् एक दिन नेपाल बन्दको आह्वान गरे । तर नेपाल बन्द खासैे ‘जाँगर’ नलाग्दानलाग्दै गर्नु परेकोजस्तो भयो । प्रभावशून्यजस्तै रह्यो ।
अन्तर्विरोध : चन्दाबाट उठेको रकम
विप्लव र प्रकाण्डबीच पार्टीभित्र चरम अन्तर्विरोध रहेका समाचारहरु प्रकाण्ड पक्राउ पर्नुअघि पनि सार्वजनिक भएका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाभित्र आर्थिक रुपमा सबैभन्दा बलियो नेता उनै प्रकाण्ड मानिन्थे । कालिकोटको निम्न परिवारका भए पनि पछिल्लो समय पार्टीका नाममा उठाइएको चन्दाको अत्यधिक हिस्सा प्रकाण्डको व्यक्तिगत जिम्मामा रहेको बताइन्छ । पाटीका नाममा उठाइएको चन्दा रकम मनोमानी प्रयोग गरेको आरोप प्रकाण्डलाई लागेको थियो । विप्लवनिकट पत्रकारहरुबीच पछिल्लो चरण भएको वक्तव्यवाजी प्रकरणलाई विप्लव–प्रकाण्ड अन्तर्विरोधकै एउटा रुपमा हेरिएको छ ।
महरा–प्रकाण्ड सम्बन्ध :
हाल सभामुखसमेत रहेका नेकपाका नेता कृष्णबहादुर महरा कुनै बेला विप्लव आफ्नो इमान्दार चेला भएको बताउँथे । पुख्र्यौली घर रोल्पा भएका विप्लव र महराबीच माओवादी जनयुद्धताका आत्मिक सम्बन्ध रहेको थियो । जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, महराले रोल्पाकै अरुसँग बढी हिमचिम बढाएको आरोप विप्लवले लगाए । विप्लवले महरालाई अवसरवादीसम्मको आरोप लगाएका थिए ।
पछिल्लो समय आफ्नै इमान्दार चेलाको पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चर्काउन महराले भूमिका खेलेको आरोप विप्लव निकट एक नेताले लगाएका छन् । अहिले उपत्यका बाहिर कार्यक्षेत्र रहेका ती नेताले भने, ‘महरा सरसँग विप्लव कमरेडको त्यति धेरै नराम्रो छैन ।’ उनले भने– पछिल्लो समय विप्लवविरुद्ध महराले प्रकाण्डलाई बोक्नु रहस्यमय भएको छ ।
आफूले रिस्क मोलेर चन्दा उठाएको भन्दै त्यसरी उठाइएको चन्दा रकम प्रकाण्डले एकाघरका सदस्यका नाममा बैंकमा बचत गरेको स्वीकार गरेको बताइएको छ ।
ती नेताले भने, ‘महरा सर अहिले सबै सुविधा पाउने सरकारी पदमा हुनुहुन्छ । प्रकाण्ड विद्रोहका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने जिम्मा लिएर हिंड्नु भएको हो । महरा सरसँग उहाँको हिमचिम बुझिनसक्नु थियो ।’ उनले भने, ‘महरा सरमार्फत् प्रकाण्ड अहिलेको सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको सूचना पार्टीलाई आएको थियो । तर उहाँ रहस्यमय ढङ्गले पक्राउ पर्नु’भो ।’ सीधै नभने पनि प्रकाण्डले विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विद्रोह गर्ने तयारीमा रहेको उनले स्वीकार गरे ।
प्रकाण्ड पक्राउ प्रकरणले शालिन मानिएका नेकपाका नेता तथा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फेरि एकपटक विवादमा तानेको छ ।
विप्लव भारतमा !
‘भन्ने बेलामा नेपालमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्ने भन्ने, आफूचाहिं भारतमा सेल्टर लिएर बस्ने’ नेकपाका महसचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’माथि यस्तो आरोप लागेको छ । विप्लवकै पार्टीका अर्का एक नेताले प्रकाण्ड पक्राउ पर्नुको कारण नै विप्लव भारतमा सेल्टर लिएर बस्नुलाई मानेका छन् । उनका अनुसार सरकारले पक्राउ गर्न पुर्जी काटेको र पक्राउ पर्नसक्ने खतरा रहेको भन्दै केही समयअघिदेखि विप्लव दक्षिणी छिमेकी देश भारत बस्दै आएका छन् ।
आफूले रिस्क मोलेर चन्दा उठाएको भन्दै त्यसरी उठाइएको चन्दा रकम प्रकाण्डले एकाघरका सदस्यका नाममा बैंकमा बचत गरेको स्वीकार गरेको बताइएको छ । ऊर्जावान् युवा नेता विप्लव सुरक्षाका कारण देशबाहिर सेल्टर लिएर बस्न थालेपछि चन्दाबाट उठाइएको रकम आफ्नो निजी प्रयोजनमा प्रकाण्डले खर्च गरेको आरोप उनलाई लगाइएको बताइन्छ ।
क्रान्तिका लागि उठाइएको चन्दा व्यक्तिगत बनाउनका लागि प्रकाण्ड आफैले पक्राउको नाटक गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक नेताले दावी गरे । उनले भने, ‘त्यही भएर पछिल्लो समय प्रकाण्ड पक्राउविरुद्ध पार्टीले बोल्ड कार्यक्रम ल्याएको छैन ।’
यसैबीच प्रहरी हिरासतमा रहेका खड्गबहादुर वि.क. (प्रकाण्ड), मोहन कार्की (जीवन्त) लगायतका नेताले सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
Previous Previous post: श्रीलङ्काका राष्ट्रपति स्वदेश फर्किए
Next Next post: भवन नहुँदा स्वास्थ्यसेवामा प्रभाव